निर्माताको भाग्य चम्काउने सात बलिउड चलचित्र, कसले कति कमाए ? - Everest Dainik - News from Nepal
निर्माताको भाग्य चम्काउने सात बलिउड चलचित्र, कसले कति कमाए ?
बलिउडको २०१७ को रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक भइसकेको छ । कमाइका आँकडाहरूले ‘टाइगर जिन्दा है‘को दबदबा देखाए पनि सबैभन्दा बढी प्रतिशत मुनाफा कमाउने सात चलचित्रमा भने यो पर्न सकेको छैन । आखिर को हुन त निर्माताको भाग्य चम्काउने सात बलिउड चलचित्र ?
चार सय ६३ प्रतिशत मुनाफा कमाएर राजामौली निर्देशित म्याग्नस ओपस बाहुबली-२ भारतको आजसम्मकै सर्वाधिक कमाउने चलचित्र पनि हो ।
ट्वाइलेट- एक प्रेमकथा
कुल २४ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा बनेको यस फिल्मले बक्स अफिसमा लगभग एक सय ३४ करोड कमाएको थियो । यसले लगभग चार सय ५७ प्रतिशत मुनाफा कमाएको देखिन्छ ।
कुल २२ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानीको यस चलचित्रले बक्स अफिसमा अस्सी करोडभन्दा बढी कमाएर दुइ सय ६४ प्रतिशत मुनाफा कमाइसकेको छ ।
सामाजिक र शैक्षिक मुद्दालाई विषयवस्तु बनाएर निर्माण गरिएको यस चलचित्रको कुल लागत २२ करोड भारतीय रुपैयाँ थियो भने बक्स अफिसबाट यसले ६९ करोड कमाएको थियो । यसको मुनाफा लगभग दुई सय १४ प्रतिशत देखिन्छ ।
अक्षय कुमार अभिनित गत वर्षको दोस्रो फिल्म जौली एलएलबी-२ ले एक सय ६० प्रतिशत मुनाफा बटुलेको छ । ४५ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा निर्मित यस फिल्मको कुल कमाइ एक सय १७ करोड थियो ।
यस चलचित्रको लाइफटाइम कलेक्सन एक सय १७ करोड थियो भने लागत ४५ करोड । यसको कुल मुनाफा एक सय ५९ प्रतिशत थियो ।
साह्रै विवादित रहेको यस फिल्मको लाइफटाइम कलेक्सन १८ करोड थियो भने बजेट मात्र सात करोड । यसरी यसको मुनाफा एक सय ५८ प्रतिशत हुन पुगेको छ ।
ट्याग्स: bollywood, box office